6 xirfadood oo aad u baahan tahay in aad yeelato si aad hoggaamiye u noqoto
Home Maskax-fur 6 xirfadood oo aad u baahan tahay in aad yeelato si aad...
Xirfadaha uu leeyahay hoggaamiyaha wanaagsan
hoggaamiyaha wanaagsan xirfadaha uu leeyahay
“u tababaro oo tababaro isuna diyaari.” Sida la wada ogyahay arrintan waa talo wanaagsan, waa haddii aad dooneyso in aad noqoto qof wax soo saar leh oo shaqo wanaagsan, dhaqaale badanna sameeya – Sidoo kale waa talo fiican, haddii aad dooneyso in aad noqoto hoggaamiye ka muuqda caalamka.
Cilmi baaris cusub ayaa muujineysa in sida keli ah ee lagu barto xirfadda hoggaamiyaha wanaagsan aysan ku koobneyn akhrinta buugaagta iyo casharada fasallada laga bixiyo, balse ay ku xiran tahay khibradda rasmiga ah iyo ku celcelinta tababarada.
Sidoo kale waxaa baaritaanka lagu ogaaday lix xirfadood oo hoggaamiye kasta looga baahan yahay in uu u tababarto. Xirfadahan ma ahan kuwa cusub balse waa arrimo la yaab leh.
6 xirfadood oo aad u baahan tahay in aad yeelato si aad hoggaamiye u noqoto-min
Hoggaamiyeyaasha lala hadlay axay xoojiyeen in xirfadahan ay yihiin kuwa lagama maarmaan ah. Dadka ku haminaya in ay hoggaamiyeyaal noqdaan waa in ay xoogga saaraan sidii ay ku baran lahaayeen arrimahan:
La imow aragti ay ku farxaan kuna adag ama tartan u ah dadka aad madaxda u tahay.
Hiigsigaas waxaad u bedeshaa istiraatiijiyad cad oo la fahmi karo iyo tallaabooyiinka la qaadayo si loogu guuleysto, iyo waxa mamnuuca ah in la sameeyo.
Shaqaaleysii, aqoontoodana kordhi, kuna abaalmari shaqada fiican si kooxda wanaagsan ay u meelmariyaan istiraatiijiyaddaas.
Diiradda saar natiijo la qiimeyn karo.
Dhiirageli hal-abuurka, fikradda wanaagsan iyo waxbarashada si kooxdaada u kobcaan una noqdaan hoggaanka mustaqbalka.
Naftaada xitaa hoggaami – Shaqsiyaddaada baro, waana in aad kala maareysaa shaqada iyo noloshaada caadiga ah.
Macno ma lahan heerka aad ka gaartay xirfaddaada shaqo, weli waa inaad hesho fursad aad ku xifdiso xirfadahan. Waad haysan kartaa shaqaadooyiin kala duwan iyo arrimo aad ku guuleysatay, weli waa lagama maarmaan arrimahan.
In aad dib u milicsato guulaha iyo guuldarooyiinka ee tallaabo kasta, iyo in jawaab celin aad ka hesho dadka aad shaqo wadaagga tihiin iyo kuwa ku leyliya waxay kaa caawinayaan in horumar aad sii sameyso guulna aad gaarto. Sidoo kale waxay fursad u tahay in aad ogaato meelaha aad u baahan tahay in aad sii barato.
Ha sugin in lagu siiyo fursad aad wax ku barato. Adiga raadi, si iskaa ahna isu xilqaan. Haddii shirkadda aad u shaqeyso ka waydo fursadda, bannaanka ka raadso, sida arrimaha bulshada, hay’adaha mutadhawiciinta ah iyo kuwa kale oo aalaaba u baahan hoggaamiyeyaal.
Ugu dambeyn waad gaari doontaa in aad arrimahan awood u yeelato, waadna arki doontaa natiijo wanaagsan. Waxaadna fududeyn kartaa in guul ay gaaraan kooxda aad ka tirsan tahay, kuwa aad hoggaamineyso iyo kuwa ka tirsan qeybtaada.
Awoodda ku jirto sirta garashada dareenka hoggaamineed